ESI KPOCHAPỤ IHE NIILE NA OPERA - OPERA - 2019
Opera Browser: ikpochapụ akụkọ ihe mere eme nke ibe weebụ gara
Ihe ndekọ na H.264 mgbakwunye bụ obere vidiyo. Ịmeghe ha na kọmputa abụghị ihe siri ike, mana usoro ya anaghị adị mfe maka iji ụbọchị. Ihe ngwọta kachasị mma na ọnọdụ a ga-abụ iji tọghata AVI ọzọ.
Hụkwa: Otu esi emeghe H.264-vidiyo
H.264 ka ụzọ ntọghata AVI
Ụdị H.264 bụ kpọmkwem, n'ihi na naanị ị nwere ike ịgbanwere vidiyo dị otú ahụ na AVI site na iji ngwanrọ mgbagwoju anya.
Usoro 1: Hazie Ụlọ ọrụ
Onye na-emepụta ntọala usoro ntọala na-amata H.264 ma nwee ike ịtụgharị faịlụ dị otú ahụ na ọtụtụ usoro ndị ọzọ, nke bụ AVI.
Download usoro mmepụta ihe
Gbaa usoro ihe omume ahụ na na ngọngọ ahụ "Video" pịa bọtịnụ "AVI".
Ngwaọrụ ga-emeghe maka ịdebanye faịlụ n'ime usoro ihe omume ị chọrọ pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye Njikwa".
Jiri uru "Explorer" iji gaa na nchekwa ahụ na faịlụ ahụ echere, họrọ ya ma pịa "Meghee".
Mgbe nbudata nchịkọta ahụ, jiri bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe ị laghachiri na windo Ụlọ Ọrụ Ukwu, gosipụta faịlụ agbakwunyere na pane ọrụ na nri ma pịa "Malite".
Usoro ntọghata ga-ebido, oge nke dabere na ntinye faịlụ na ikike kọmputa. Banyere njedebe nke usoro ahụ, usoro ihe omume ahụ ga-ezigara na ụda olu na ozi na mpaghara ngosi. Ị nwere ike ịlele nsonaazụ nke ntọghata site na ịpị bọtịnụ. "Njedebe Ikpeazụ" na toolbar.
Akwukwo AVI a kwadebere ga-apụta na ndekọ aha.
Nhazi Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, mana n'ihi na enwere ike ịchọta usoro H.264, ntụgharị ahụ adịghị edozi mgbe niile. N'ịbụ ndị nwere nsogbu dị otú ahụ, hichapụ faịlụ ahụ ma weghachi usoro ahụ.
Usoro 2: Ihe ọ bụla Video Ihe Ntụgharị Free
Ihe ọzọ na-eme mgbanwe, oge a na-emepụta nanị na vidiyo. Na Any Video Converter Free enwere nkwado maka H.264, nke ngwa ahụ na-enye gị ohere ịmegharị na nsụgharị AVI.
Nbudata ihe omuma ihe obula obula
Meghee usoro ihe omume ma pịa bọtịnụ ukwu. "Tinye ma ọ bụ dọrọ faịlụ" ke ufọt window.
Jiri "Explorer" iji gaa na nchekwa ahụ na faịlụ H.264. O yikarịrị ka usoro ahụ anaghị amata ya na-akpaghị aka, n'ihi ya, ị ga-eji ndepụta ọdịda. "Ụdị Njikwa"nke ịhọrọ nhọrọ "Faịlụ niile"emi odude ke isọn̄.
Na-esote, họrọ vidiyo ahụ achọrọ ma bufee ya na mmemme site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Meghee".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ profaịlụ ntọghata, ya bụ, usoro ntaneti mmepụta. Mepee ndepụta nke profaịlụ dị nso, wee họrọ ihe kwesịrị ekwesị - dịka ọmụmaatụ, "AVI Movie"..
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri usoro ntọala dị elu nke usoro ihe omume ma pịa "Tọghata" ịmalite usoro ntọghata.
Na njedebe nke usoro ga-emeghe. "Explorer" na ọnọdụ nke nsonaazụ ntọghata.
Ihe ọ bụla Video Converter Free na - arụ ọrụ na H.264 karịa ọkwa usoro, n'ihi ya ọ bụ ezigbo ngwọta maka nsogbu anyị na - atụle.
N'ịkọtara elu, anyị na-achọpụta na ndepụta nke ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike ịmegharị H.264 na AVI abụghị nanị na mmemme ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ya mere, anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na nyocha anyị na ndị ọzọ na-emegharị vidiyo.
Hụkwa: Software iji tọghata vidiyo
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na vidio na YouTube na-agbada
Otu esi eji Windows Movie Maker
Ihe mere ihe nchọgharị ahụ ji amalite
Esi zoo ngalaba nke mgbake na Windows
Ihe oyiyi diski
Nke kacha mma
Egwu na friezes
Akwụkwọ dị nnọọ mfe ịgụ site na ekwentị ma ọ bụ obere mbadamba. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile ka esi ebu ya ma n'otu oge ahụ mụta ya. N'ụzọ dị mma, nke a dị mfe ime, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-azụta akwụkwọ. Ụzọ ịgụ akwụkwọ na gam akporo Ị nwere ike ibudata akwụkwọ na ngwaọrụ site na ngwa pụrụ iche ma ọ bụ saịtị ọ bụla. GụKwuo
Proxy Switcher 5.20.0
Ngwa kachasị mma maka ịgụ akwụkwọ na gam akporo
https://termotools.com ig.termotools.com © Opera 2019